Blog Blog ee Tagged "Aqoonta iyo Aqoonta" - THE INDIAN FACE
Ku gudub Gggles
Jinni Hindi ah
adduunka The Indian Face
Cayaaraha iyo Cayaaraha
Safarka iyo Goobaha
Aqoonta iyo Aqoonta
Fanka iyo Dhaqanka
Caafimaadka iyo Tababarka
Gaarigaaga waa madhan yahay
Sii wad adeegsiga →
10 waxyaalood oo ay tahay inaad ka ogaato Surfskate
Soo ogow 10 waxyaalood oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan santuuqa! Laga soo bilaabo asalkiisa iyo kuwaas oo ah noocyada ugu muhiimsan ee shaashadda, iyo sida aad u dooran karto guddigaaga si aad ugu haboonaato baahiyahaaga. Ha moogaan!
Xayawaanka badda ee qarinaya Xeebta Weyn (Great Barrier Reef) midkee baa xayawaanka aad ugu jeceshahay?
The Great Barrier Reef waa deegaankii ugu weynaa ee ku qarqiya meeraha oo dhan. Sababtaas awgeed, duunyadeeda ayaa ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan meeraha. Halkan ka baro xayawaannada aan ka heli karno nidaam-deegaankan oo ah Goobta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO!
Sida loo bilaabo orodka
Ka soo bilaabashada xoqida had iyo jeer waa caqabad weyn iyo go'aan adag. Xaqiiqdii waxaad la yaaban tahay waxyaabaha sida ... Sidee loo bilaabaa orodka? Waan awoodi doonaa inaan sameeyo? Waa inaan sameeyaa? Gudaha The Indian Face Waxaan mar walba kugu martiqaadeynaa inaad aaminto naftaada oo waliba mudnaanta koowaad siiso caafimaadkaaga iyo ladnaantaada waxkasta. SSii wad akhriska oo soo hel fikradaha cusub, tabaha iyo jimicsiga kaa dhigi doona inaad rabto inaad orod u gasho berri.
Dhammaan wixii ku saabsan maratoonnada waaweyn ee adduunka (Marathon Majors World)
Waxaa jira dhacdooyin badan oo isboorti ah oo isu keena ciyaartooyda adduunka oo dhan, laakiin shaki la’aan dhacdooyinka u heellan orodka waxaa ka buuxa dad fara badan oo orodyahanno ah oo doonaya inay xirfadahooda imtixaanka geliyaan oo dhexdooda, shaki la’aan, kan ugu caansan Marathon-ka Caalamka: Marathon-ka ugu muhiimsan uguna aqoonsan adduunka oo dhan taariikhda. Akhriso oo waxbadan ka ogow iyaga!
Ku socoshada waqtiyada Covid Suurtagal?
Hadda oo aan haysanno xaddidyo "ka yar" oo aan awood u yeelannay inaan si fiican ula qabsanno xaaladaha "caadiga ah ee caadiga ah" iyo "dhaqdhaqaaqa yaraaday", ma iska dhaafi karno waxa aan aad u jecel nahay: isboortiga. Soo ogow sida looga fogaado infekshinka marka aad orodo oo aad oroddo xilliyada Covid!
Kala soocidda mawjadaha Soo ogow noocyada kala duwan ee hirarka iyadoo loo eegayo sida ay u dillaaceen, asalka iyo qaab dhismeedkooda!
Dadka jecel isboortiga xad dhaafka ah iyo xiisaha biyaha kaliya waxay rabaan hal shay: hirar, hirar, iyo hirar badan! Waxaa jira kala sooc mowjado ballaadhan oo aad qiyaasi karto! Miyaad horeyba u taqaanay noocyada kala duwan ee hirarka? Sii wad aqrinta iyo soo ogaanshaha dhammaan noocyada mowjadaha jira iyadoo loo eegayo astaamahooda kala duwan!
Ogow muhiimadda muraayadaha indhaha ee barafka
Markii la gaaro xilliga qaboobaha iyo imaatinka barafka ee muddada dheer la sugayey, dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan aadno barafka, u tagno socodno buuraleyda ah, iyo howlo la xiriira isboortiga bannaanka. Indhaheena waa in had iyo jeer lagu ilaaliyaa muraayadaha indhaha ee la oggol yahay si aysan u xanuunsan keratitis ama nooc kale oo dhaawac ah!
Ogow faa'iidooyinka ay leedahay xirashada muraayadaha indhaha polarxardhay
Laga soo bilaabo The Indian Face® waxaan dooneynaa inaan kuu sharixno waxa ay dhab ahaan uga dhigan tahay muraayadaha muraayadaha indhaha polarkor loo saaray iyo sidoo kale, waxaan sharraxeynaa faa'iidooyinka noocan ah muraayadaha indhaha polarla saaray iyo sababta aad u dooranaysid iyadoo loo eegayo astaamahooda. Sii wad akhriska, halkan waxaan ku siineynaa dhammaan talooyinka iyo faahfaahinta aad u baahan tahay!
Waa maxay iskaanka polar?
Muddo dheer, qarniyo badan, baddu waxay ahayd halyeeyada weyn ee qabsashadii ulaha. Habka "sahaminta" polar"Waxay ahayd ujeeddada dad badan oo quudhsadayaal ah iyo kuwa jecel helitaanka daahitaanka qarniyo. Halkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa sahamintu tahay! polar Oo maxay ka kooban tahay!
10 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan dhagaxaanta dhuxusha Maxaad runtii ka ogtahay iyaga?
Waxaan qabatimnay dabeecadda iyo wax kastoo la xiriira related Waan jecel nahay! Sababtaas awgeed, waxaan dooneynaa inaan kula wadaagno 10 xiisaha xiisaha leh ee aadan ka ogeyn tafaariiqda dhuxusha ee boggan faafaahin ee aan kuu diyaarinnay. Ku dhaco jacayl sidayada oo kale khasnadahaan dabiiciga ah!
Difaaca xayndaabka weyn ee quruxda dabiiciga ah!
The Great Barrier Reef in Australia, oo ah Goobta Dhaxalka Adduunka ee Ustaraaliya ee UNESCO, waxay la il daran tahay bur bur xoog leh oo ka dhashay kor u kaca heerkulka badda oo soo afjaraya nolosha jilicsan ee meerayaasha. Halkan ka ogow sida loo ilaaliyo reef reef ee laga helo badaha.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo iyo jawaabaha ku saabsan muraayadaha indhaha polarxardhay
Laga soo bilaabo The Indian Face® waxaan dooneynaa inaan kuu sharixno waxa ay dhab ahaan uga dhigan tahay muraayadaha muraayadaha indhaha polarkor loo saaray iyo sidoo kale, waxaan sharraxeynaa faa'iidooyinka noocan ah muraayadaha indhaha polarla saaray iyo sababta aad ugu dooranaysid hadba astaamahooda. Ha uga tagin shaki, halkan waxaan uga jawaabeynaa su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan muraayadaha indhaha polarxirtay!
Soo ogow sirta ka dambeysa Reef Barrier Great!
The Great Barrier Reef waa qaybta ugu weyn ee dhagaxleyda adduunka ee waqooyiga-bari ee Australia, dhulka Queensland. Isagoo daboolaya in ka badan 340.000 km2, Great Barrier Reef waxaa loo tixgeliyaa noolaha ugu weyn adduunka. Halkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan khasnaddan dabiiciga ah iyo dhammaan waxyaalaha qarsoon ee ay qarinayso!
Koofiyadu waa halyeeyada taariikhdeenna!
Koofiyaduhu waxay noqdeen dhar maalinle ah iyo waxyaabo siyaado ah oo ay u isticmaalaan malaayiin dad ah oo dunida ku nool: muusikiisteyaal, skateboarders, ciyaartooy ... Dhammaan dadkani waxay ka dhigeen koofiyad astaan ​​astaan ​​u ah dhaqamada qaarkood, isboortiga ama dhaqdhaqaaqa. La kulan kuwa calaamadeeyay taariikh kahor iyo kadib taariikhda!
10 waxyaabood oo lagu tababaro cayaaraha buuraha waqtiyada Covid
Qalab boorsadaada oo qorsheyso xiisahaaga soo socda! In kasta oo masiibada ay nolosheena ku badashay ku dhowaad dhinac walba, haddana #IyadooSiriiradu ma quustaan ​​mana sii wataan nolol aad u daran, haa, oo leh "xorriyad cusub". Raadi waxa ay yihiin talooyinka iyo tallaabooyinka badbaadada si aad ugu tababarto cayaaraha buurta aad ugu jeceshahay!
10 waxyaabood oo layaableh oo aadan ka aqoon ku saabsan dabaasha
Waxaan soo diyaarinay xaqiiqooyinka ugu fiican ee cajiibka ah ee ku saabsan dabaasha, si aad waxbadan uga baran karto isboortigan aadka u daran ee aadka u xun. Ma iloobi kartid!
Loogu talagalay dadka jecel dabaasha: Baro asalka dhabta ah ee isboorti!
Baro taariikhda iyo xaqiiqooyinka xiisaha leh ee ku saabsan duufaanta! Waxay ka badan tahay 500 sano taariikhda tan iyo markii uulliyihii ugu horreeyay ka fikiray, "Waxaan jeclaan lahaa inaan raaco mowjaddaas" jasiiradaha Polynesia, markii sahamis Ingiriisi ah James Cook uu si guul leh ku gaadhay Jasiiradaha Hawaiian 1778.
Tilmaamaha si aad u maydho koofiyadaha xamuulka qaada
Ha u oggolaan koofiyad aad jeceshahay inay xumaato! Tilmaame deg deg ah oo fudud oo ku saabsan sida loo nadiifiyo daboolka xamuulkaaga si xaaladdiisu u fiicnaato oo u sii dheeraato
Muraayadaha muraayadaha barafka lagu gado ee barafka lagu gado ee 'Skiiglass' Goorma iyo maxaan u isticmaalaa?
Qaado muraayadaha barafka Waa lagama maarmaan marka aan ku tababbarayno ciyaartan nooc kasta oo ay tahay hababka barafka taasi jirtaa? Nala soo baar qaar ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee aad ku ordi karto oo aad u ogaan karto sababta aad had iyo jeer u qaadato kuwa wanaagsan! muraayadaha barafka ilaalin ah!
Taariikhda Muraayadaha Aviator-ka Ugu caansan adduunka!
Miyaad horeyba u taqaanay taariikhda muraayadaha duuliyaha? Si ka wanaagsan ayaa loo yaqaan "Aviators ”waa mid ka mid ah muraayadaha indhaha ugu quruxda badan uguna caansan. Soo ogow sida qalabkan astaanta ah uu ku dhashay, oo waxaad ogaataa xiisaha labada muraayadood ee qarsoon ee aan ka maqnaan karin ururintaada.
5ta daqiiqadood ee ugu habboon in la xidho goggles-kaaga ski
Runtii diyaar ma u tahay inaad ka gudubto halista dabeecadda markaad barafka wadato? Soo ogow 5-ta daqiiqadood ee ugu muhiimsan ee aad ku bogaadin doonto xirashada kan ugu fiican muraayadaha barafka!
Muraayado Mid ka mid ah hal abuurka kacaanka taariikhda!
Adduun aan lahayn muraayadaha indhaha ama muraayadaha indhaha lama mid ahaado macno kasta. Dhaqdhaqaaqa aragga iyo ilaalinta ay na siinayaan waa mid aan xad lahayn marka aan isticmaalno muraayadaha saxda ah. Wax yar ka ogow taariikhda ka dambeysa muraayadaha indhaha, oo ah mid ka mid ah hal-abuurradii ugu isbeddelka badnaa taariikhda aadanaha!
Haddii aad shaki ka qabtid muraayadaha noocan ah, oo aad ka fiirsaneyso inaad ku guuleysato, ka aqriso, oo aad ogaatid faa iidooyinka badan ee labbiska muraayadaha indhaha ee galaaska. polarizado.
Qaado muraayadaha isboortiga Waa lama huraan dhammaan nashaadyada jir ahaaneed ee aan dibedda ku qabanno. Fikradda ayaa ah inaad dareento xorriyadda dhaqdhaqaaqa si kasta oo diirada loo saaro ficil oo diirada loo saaro dabeecadda.
1 2 3 Xiga
© 2021 THE INDIAN FACE. 2017 THE INDIAN FACE. All Rights Reserved.